राजनैतीक धरातल गुमाउँदै नेकपा :पार्टीमा उच्च स्थानमा रहेका नेताहरुको बिल्लीपाठ!::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
राजनैतीक धरातल गुमाउँदै नेकपा :पार्टीमा उच्च स्थानमा रहेका नेताहरुको बिल्लीपाठ!
सूर्य थापा समूह विष्णु पौडेलको पछाडि लाग्न सुरु गरिसकेको छ । पोखरेलबाट केही नहुने भएपछि नेताहरूले धमाधम गुट परिवर्तन गरेका हुन् । ओलीले पोखरेलको मात्रै होइन झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई सहितका थुप्रै नेताको राजनीतिलाई नोक्सानी पुर्‍याइदिएका छन् ।
उता, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि शक्ति बस्नेत, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरासहितका नेताहरूको राजनीतिमा खेलवाड गरेका छन् । महराले त प्रचण्डको खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन् । प्रचण्डले माओवादी पार्टी सिध्याएको आरोप महरा समूहको छ । माओवादीमा सबैभन्दा धेरै चोट टोपबहादुर रायमाझीलाई परेको छ । रायमाझीलाई सिध्याउन प्रचण्डले हदैसम्मको तल्लोस्तरको राजनीति गरेको आरोप छ ।
ओलीसँग कुनै पनि सर्त नराखेका प्रचण्डले दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका छन् । पार्टी अध्यक्षमा उनलाई रोक्ने धेरै नेताहरू छन् । ओलीको चँगुलमा फसेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद नमिल्ने हो कि भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ ।
पार्टी एकता सँगै बडेको मतभेद तथा असन्तुष्टीले कुनै रुप लिन्छ या लिँदैन भन्ने कुरा चाँही हेर्नै बाँकी छ।